Shir looga hadlayoMaaraynta Masiibooyinka oo Muqdisho ka furmay (Sawirro) – Radio Daljir
Janaayo 16, 2018 1:37 g 0
Mas’uuliyiinta Wasaaradda gargaarka iyo maareynta Masuubiiyinka ayaa Muqdisho ka furtay shirka siyaasadda Qaran ee Maareynta Musiibooyinka.
Munaasibadda daahfurka shirkan waxaa ka qeybgelaya mas’uuliyiinta Wasaaradda,hay’adaha kale ee dowladda iyo xubno ka socda wakiillada Caalamka iyo hay’daha samafalka ee Somaaliya ka howlgala.
Wasaaradda gargaarka iyo maareynta Musiibooyinka waxaa ay ku cusub tahay Soomaaliya,waxaana horay u jiray iyada oo hay’da kaliya ah,iyada oo Xukuumadda Ra’isalwasaare Kheyre oo ku soo aadday iyada oo uu dalka baaar ku jiro lagu daray Wasaaraddaas golaha wasiirrada Soomaaliya.
Maryam Qaasim Axmed oo ahayd Wasiirka Wasaaraddan ayaa iska casishay xilka Wasaaraddaas labo bil ka hor kaddib markii ay sheegtay in faragelin lagu hayo maamulka Wasaaradda iyada oo ilaa hadda aan la magacaabin beddelkeeda.
Shirkadda Korontada eeneeyo oo jawaab kabixiay eedayn uga timid Shirkadda Golis (dhegayso)